Thintela ukuvuza kwamanzi ekubeni yingxaki enkulu ngeLyric W1 | Iindaba zeGajethi
Thintela ukuvuza kwamanzi ekubeni yingxaki enkulu ngeLyric W1
Izixhobo zeSmart ziza kancinci emakhayeni ethu ukuze zibe yinto enye yokunxibelelana: iibhalbhu ezikhanyayo, izitshixo, iikhamera, izithethi ... kodwa asisoloko sinyanzelwa ukuba sinxibelelane nabo rhoqo. Izixhobo ze-Smart zikwasivumela ukuba silawule izinto ezahlukeneyo zekhaya lethu ngalo lonke ixesha, ezinje nge-alamu yokungena, ukuvuza kwamanzi, amandla ombane, iialamu zomlilo ...
Kuxhomekeka kuhlobo lwezixhobo ze-smart esizifakileyo ekhaya, sinokuzilungiselela ukuze zisithumele kuphela xa kukho into ebalulekileyo eyenzekayo. Namhlanje sithetha ngeLyric W1, isixhobo esikrelekrele eso uya kusilumkisa ngalo lonke ixesha xa kukho ukuvuza kwamanzi okanye ubona ubushushu ngayo nayiphi na into efumaneka kuyo.
Enkosi kuLyric W1 sinako kwangoko fumana izilumkiso kwi-smartphone yethu Ukuba amanzi kumatshini wokuhlamba avuza, into exhaphake kakhulu ngelishwa, ukuba kukho ukuvuza kwamanzi okugcwala phantsi ngomngcipheko wokuba uphele kummelwane, ukuba ifriji / isikhenkcezisi sethu siqala ukufriza ngaphezulu kwemfuneko, ukuba imibhobho iqala ukubanda ngenxa yengqele engaphandle ...
1 Isebenza njani iLyric W1
2 Izaziso eziphathwayo
3 Ubomi bebhetri
4 Umdibaniso neenkqubo esizisebenzelayo
5 Xhuma kwaye udlale
6 Ubungakanani besixhobo
7 Ixabiso kunye nokufumaneka
Isebenza njani iLyric W1
ILyric W1 ibona ngesixhobo nakuphi na ukuvuza kwamanzi okanye ukubanda kwindawo apho isixhobo sikhona, okanye sinako Yandisa uluhlu lokufumana umbulelo kwintambo yokufumanisa ibandakanyiwe kwisixhobo ngasinye, umzekelo, ukuyibeka phantsi apho umatshini wokuhlamba impahla, isomisi esomileyo, ishawa ...
ILyric W1 isebenza kunye neebhetri ngaphandle kwamacingo, ke ayifuni qhagamshelo kumbane kwaye iyasivumela yibeke naphina endlwini echaphazeleka kukuvuza kwamanzi okanye umbhobho ube ngumkhenkce. Ngaphakathi kwesicelo esivumela ukuba siphathe kwaye silawule isixhobo, sinokufikelela kwimbali yesaziso, apho sinokubona xa ialam ishukunyisiwe kwaye xa imisiwe / ifunyenwe ngokwasemzimbeni.
ILyric W1 sisixhobo esakhe safakelwa esisinika uxolo lwengqondo olupheleleyo kwaye siya kukhumbula kuphela ukuba siyidibanisile xa ialam ikhala. Esi sixhobo sinxibelelana nenethiwekhi ye-wifi yekhaya lethu, kwaye siyisebenzisa Isithumela izaziso kwiselfowuni xa ubhaqo lwenzeka. Ukongeza, isaziso senziwa nge-imeyile, ukuze sazi ngamaxesha onke ukuba kufuneka sazise ilungu losapho okanye ummelwane ukuba eze endlwini yethu.
Ukuba sithatha uhambo lweentsuku ezimbalwa kwaye kunokwenzeka ukuba sinqamle ngokupheleleyo, kwisicelo ngokwaso singamisela ukuba yazisa abantu abanezitshixo kwidilesi yethu, ukuze beze ngokukhawuleza kwaye bazame ukusombulula ingxaki. Kodwa ayithumeli kuphela izaziso kwiselfowuni, kodwa nayo ikhupha isilumkiso se-acoustic se-100db, ukusazisa ukuba sisekhaya, apho ngamaxesha anqabileyo sihlala siphethe i-smartphone yethu nathi.
Enye yeenzuzo ezinikezelwa yiLyric W1 kukuba ukusebenza kwayo kukusebenzisa iibhetri, zona ivumela ukuba siyibeke nakweyiphi na indawo yendlu, apho ngokucacileyo uqhagamshelo lwe-intanethi lufika. Ubomi bebhetri beli sixhobo yiminyaka emi-3, kwaye ngesicelo esiselfowuni uqobo, sinokujonga inqanaba lebhetri okanye sifumane izaziso xa zikumanqanaba abalulekileyo kwaye kufuneka siqhubeke ukuyitshintsha.
Umdibaniso neenkqubo esizisebenzelayo
Kodwa ukuba ukhetho lwesilumkiso olunikezelwa yiLyric W1 lubonakala lumbalwa kuwe, enkosi kwinkqubo ye-automation ye-IFTTT sinokwenza ezethu izilumkiso ngokusebenzisa iiresiphi, ukuze umzekelo umbala wee-bulbs ze-Philips Hue smart ziyahluka ukuba ukuvuza kufunyenwe okanye ubungozi obunokubakho beqabaka buye bafunyanwa.
Xhuma kwaye udlale
Ngokungafaniyo nezinye iintlobo zezixhobo ze-smart, iLyric W1 ayifuni akukho bhulorho yokuqhagamshela kwi-intanethi kwaye ukwazi ukunxibelelana nayo. Ukusuka kwisicelo ngokwaso sinokufikelela ngqo kwisixhobo kwaye silawule lonke ulwazi olusinika lona. ILyric W1, ukongeza ekufumaneni ukuvuza, iyasazisa malunga neqondo lobushushu bendawo apho ikhoyo kunye nokufuma.
ILyric W1 inobukhulu obuncinci kakhulu, i-8 cm x 8 cm x 3 cm, yona sivumele ukuba siyibeke naphina. Umva wesixhobo, apho ubeka khona isixhobo kwaye apho kufuma khona ubushushu kunye nobenzi boluvo, benziwe ngerabha kwaye buyikhusela ngokukuko isixhobo ngokuchasene nokuvuza kwamanzi okunokwenzeka, ngaphandle kokuba oku kungenxa yombhobho owaphukileyo kwaye amanzi aphuma ngaphantsi uxinzelelo.
I-Honeywell's Lyric W1 iyafumaneka kwiAmazon ngexabiso lama-euro angama-79, ixabiso elingaphezulu kwesixhobo esifanelekileyo esinokusinceda siphephe ububi obukhulu ekhayeni lethu. Ukuthathela ingqalelo ukuba ukuvuza kwamanzi kungathathi kuphela iinkumbulo zethu ezixabisekileyo, kodwa kunokubangela nomonakalo omkhulu ekhayeni lethu, IHoneywell's Lyric W1 ingaphezulu kokucetyiswa, hayi kuphela ikhaya lethu, kodwa kwakhona ukuba sinamakhaya amabini, iindawo zokuhlala esingasidli ngokuzihambela qho ngenyanga.
I-Honeywell Lyric W1 -ukuvuza kwamanzi kwi-Wi-Fi kunye ne-detective freeze, emhlophe
ILyric W1-ukuvuza kwamanzi kunye nesitshixo somkhenkce
Ulwandiso lwentambo yokufumanisa ukuvuza kufakiwe
Amandla anamandla e-100dB acoustic
Esi sixhobo sinokuba sincinci ngandlela ithile, kodwa kuthathelwa ingqalelo ukuba ngasemva kulungiselelwe isixhobo ukuze sikwazi ukubona ukuvuza ngelixa sikhuselwe, ubukhulu banele ngokwaneleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » elektroniki » Thintela ukuvuza kwamanzi ekubeni yingxaki enkulu ngeLyric W1
Uhambo lokuqala kwiHyperloop lusondele kunokuba bekulindelwe